I-Apple ibhiyozela uNyaka oMtsha weLunar kunye neNyanga emnyama kunye nemingeni ye-Apple Watch | Iindaba ze-iPhone
I-Apple ibhiyozela uNyaka oMtsha weLunar kunye neNyanga emnyama kunye nemingeni emitsha ye-Apple Watch
Ingelosi Gonzalez | | Apple Watch, Izaziso
I-Apple Watch ihamba nathi yonke imihla kwaye yenza ukuhamba kuba lucelomngeni ngakumbi nangakumbi kunye nenjongo kunesibophelelo. Esinye sezizathu zale nyaniso kukusondelelana kwe-watchOS kunye nomsebenzisi kunye nenani 'lemingeni' okanye i-interjections kumsebenzisi. Inyaniso, ngenyanga kukho uluhlu lwemisebenzi imingeni ezikuvumela ukuba ufumane amabhaso, iimbasa kunye izitikha ukubonisa off kwezinye apps iOS. Ukufika kwenyanga kaFebruwari kuza nale mingeni mitsha inxulumene UNyaka oMtsha waseLunar eqala ngoFebruwari 1, usuku apho i Inyanga yeMbali yabaNtsundu. Ezi njongo zimbini zingundoqo kwimingeni emitsha yomsebenzi we-Apple.
Inyanga yeMbali emnyama kunye noNyaka oMtsha weLunar, imingeni emitsha kwi-Apple Watch
Njengoko siphawulile, Imingeni yomsebenzi we-Apple Watch zivumela umsebenzisi ukuba afumane iimbasa kunye nezitikha xa begqibezela injongo. I-Apple yenza ucelomngeni lwenyanga lomntu siqu lufumaneke kumsebenzisi. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha baqalisa imingeni yehlabathi ukufumana iindebe zokubhiyozela isiganeko esiphambili sehlabathi esifana noNyaka oMtsha okanye uSuku lweHlabathi lweePaki zeNdalo.
Yongeza isakhelo kwi-iPhone yakho, i-iPad okanye i-Apple Watch ibamba ngePicsew
Inyanga kaFebruwari izisa Imingeni emibini emitsha yomsebenzi Kubasebenzisi. Eyokuqala ijolise ekukhumbuleni i UNyaka oMtsha waseTshayina okanye uNyaka oMtsha waseTshayina Lo nyaka uqala nge-1 kaFebruwari. Kulo mngeni, i-Apple icela abasebenzisi ukuba bazilolonge ubuncinane imizuzu engama-20 phakathi kwe-1 kaFebruwari kunye ne-15 ukuze bafumane ibheji kwaye bagqibezele umngeni.
El esinye isiganeko ukubhiyozela ngu Inyanga yeMbali yabaNtsundu, umbhiyozo owenzeka kwamanye amazwe afana neKhanada, iUnited Kingdom okanye iUnited States apho kukhunjuzwa khona iziganeko ezibalulekileyo nabantu bohlanga oluntsundu. Ngelixa kwamanye amazwe afana neNetherlands kule nyanga inguOkthobha, eMelika iNyanga yeMbali yabaNtsundu ibhiyozelwa ngoFebruwari. Injongo yomngeni, kule meko, kukuba vala iMotion ring (Obomvu) iintsuku ezisi-7 zilandelelana kwinyanga kaFebruwari.
Le mingeni iqalile ukubonakala kwabanye abasebenzisi kodwa Akukaziwa ukuba ziya kuba yimingeni yehlabathi kusini na. Oku kungenxa yokuba eSpeyin, ngokomzekelo, akubhiyozelwa uNyaka oMtsha okanye iNyanga yeMbali yabaNtsundu. Ke kusenokwenzeka ukuba i-Apple ithathe isigqibo sokuyinciphisa le mingeni kumazwe athile, njengoko kunjalo ngeminye imiceli mngeni yehlabathi unyaka wonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Apple ibhiyozela uNyaka oMtsha weLunar kunye neNyanga emnyama kunye nemingeni emitsha ye-Apple Watch
Vula iShot kuMceli mngeni we-iPhone ye-iPhone 13 Pro kunye nabasebenzisi be-iPhone 13 Pro Max